मुख्यमन्त्रीहरुको भेलामा कर्णालीका मुख्यमन्त्री महेन्द्रबहादुर शाही किन गएनन् ? — Sanchar Kendra
मुख्यमन्त्रीहरुको भेलामा कर्णालीका मुख्यमन्त्री महेन्द्रबहादुर शाही किन गएनन् ?
कास्कीको पोखरामा मुख्यमन्त्रीको भेला पोखरामा सुरु भएको छ । गण्डकी प्रदेशका मुख्यमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङको नेतृत्वमा पोखरामा मुख्यमन्त्रीहरुको पहिलो भेला सुरु भएको हो । भेलामा कर्णाली प्रदेशका मुख्यमन्त्री महेन्द्रबहादुर शाहीबाहेक सबै उपस्थित छन् ।
सबै प्रदेशको अहिलेको अवस्था, खेप्नुपरेका समस्या, ठूला आयोजना, अनुदान लगायतका विषयमा मुख्यमन्त्रीहरुले भेलामा छलफल गर्ने छन् । अन्तर प्रदेश परिषदको बैठकको पूर्वसन्ध्यामा पोखरामा भइरहेको यो भेलालाई महत्वपूर्ण रुपमा लिइएको छ ।
यही २४ गते प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको अध्यक्षमा परिषदको बैठक बस्दैछ । परिषदको बैठकमा सातै प्रदेशका सामूहिक एजेन्डा बनाउन भेलामा छलफल सुरु भएको छ ।
अधिकार, प्रादेशिक संरचना, कर्मचारी, आयोजना लगायतका विषयमा संघीय सरकार अनुदार बनेको प्रदेशका मुख्यमन्त्रीहरुले बताइरहेका छन् । प्रदेश सरकारलाई अधिकार दिने विषयमा संघीय सरकारले कन्जुस्याइँ गर्दा बजेट कार्यान्वयनमै समस्या भएको गण्डकी प्रदेशका मुख्यमन्त्री गुरुङले बताउँदै आएका छन् ।
अग्रगामी संविधान कार्यान्वयनमा मुख्यमन्त्रीहरुको भेलाले सम्बोधन गर्ने छ । भेलामार्फत प्रदेशको गतिको सुरु हुने उनको विश्वास छ ।
वर्षा प्रभावित कृषकका लागि राहत प्याकेज घोषणा
भारत, बेलायत र अमेरिकामा राजदूत सिफारिस, नामलिस्टसहित
प्रधानन्यायाधीशलाई महाभियोग लगाउनेबारे माधव नेपालले दिए यस्तो प्रतिक्रिया
तिहारमा फूलको माग बढ्यो तर मूल्य घट्यो
महाकालीमा डुङ्गा दुर्घटना- १ जनाको मृत्यु, एक बेपत्ता